बंगलादेश विरुद्द भारत ६ विकेटले विजयी - Nepal Cricket
बंगलादेश विरुद्द भारत ६ विकेटले विजयी
Indian cricketer Shikhar Dhawan playsashot during the second Twenty20 international cricket match between Bangladesh and India for the Nidahas Trophy tri-nation Twenty20 tournament at The R. Premadasa Stadium in Colombo on March 8, 2018. The Nidahas Trophy isatri-nation Twenty20 tournament involving Sri Lanka, Bangladesh and India. / AFP PHOTO / ISHARA S. KODIKARA (Photo credit should read ISHARA S. KODIKARA/AFP/Getty Images)
श्रीलंका, बंगलादेश सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी–२०सिरीजको दोस्रो खेलमा भारतले बंगलादेशलाई ६ विकेटले हराएको छ ।
कोलम्बोमा भएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बंगलादेशले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै एक सय ३९रन बनायो । उसका लागि लिटोन दाशले ३४ तथा सब्बिर रहमानले ३० रन बनाए । यस्तै मुस्फिकुर रहमानले १८ र तमित इक्वालले १५ रनको योगदान गरे ।
जवाफमा भारतले १८ ओभर ४ बलमा चार विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो । नियतिम कप्तान विराटकोहली र महेन्द्रसिंह धोनीलाई आराम दिएको भारतको जितमा शिखर धवनले ५५ तथा सुरेश रैनाले २८ रन बनाए । यस्तै मनिश पाण्डेले २७ र रोहित शर्माले १७ रन जोडे ।
इङ्ल्यान्ड बिरुद्ध वेष्टइण्डिजले २० रनले विजयी